> Resource > Windows > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos in Windows 8
Qaadashada sawiro waxa uu noqday habka ugu badan ee loogu talagalay dadka si ay u dhawrto xusuus markii ugu faraxsan yahay sida dhalashada, markii qoyska, arooska, koritaanka ilmaha, iyo in ka badan. Waxaa aad u sahlan si loo badbaadiyo badan oo sawiro ah oo hal meel on your computer. Waa hagaag, waxaa kale oo soo jiidasho leh fududahay in iyaga looga badiyo tirtirka qaldo ama sababo kale. Marka ay tani dhacdo in aad, waxa aad samayn in ay badbaadiyaan, gaar ahaan marka aad socda Windows 8 on your computer? Ha welwelin. Haddii aad tahay mid ka mid ah nasiib darro, waxaad tahay meeshii saxda ah. Next, waxaan kala hadli doonaa sida aad u soo kaban karto sawiro in Windows 8 la tallaabooyinka faahfaahsan.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada sawir ee Windows 8
Haddii aad ka shubeen Recycle Bin ka dib markii aad la tirtiro photos kuwa on your computer, ama waxaad la tirtiro iyaga dhaafayo Recycle Bin, jidka loo maro u celinaynaa ka Recycle Bin waa dhammaadka dhintay. Waxaad u baahan tahay sawir kabashada qalab dhinac saddexaad ah oo kaa caawinaya in aad ka Windows 8. soo ceshano photos lumay, saasuuna barnaamijka waa in la jaan qaada Windows 8. Ha leeyihiin hal? Halkan waa talo: Wondershare Photo Recovery , kaas oo si fiican u la shaqeeya Windows 8 oo kuu ogolaanaya in aad ka bogsato photos lumay ee Windows 8 3 qasabno.
Ka hor inta aanay is bilowday, ma badbaadiyo wixii macluumaad cusub oo ku saabsan Risaalo meesha aad kaliya laga badiyay sawiro aad, oo ay ku jiraan download ama loo soo dajiyo barnaamij kasta, si looga fogaado overwriting aad sawiro lumay.
Download version maxkamad free of this Windows 8 sawir kabashada qalab hoose si aad u leeyihiin a day hore.
Tallaabada 1. Launch Windows 8 sawir kabashada software
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda software ka soo kabashada sawir for Windows 8, waxaa lagu daahfuri on your computer, oo waxaad heli doontaa suuqa kala hoose soo socda. Guji "Start" si ay u bilaabaan soo kabashada sawirka in Windows 8.
Tallaabada 2. Dooro Risaalo iyo iskaan
Halkan, oo dhan qoruhu on your computer la soo daabici doonaa. Ka mid ah halkaas oo aad sawiro lumay badbaadeen hor Dooro oo guji "Scan" si ay u iskaan kuwa photos lumay.
By jidkii, ma aha oo kaliya photos, software this sidoo kale soo kaban karto, aad badiyay video iyo maqal ah files. Haddii aadan rabin in aad u hesho, waxaad nadiifin kartaa natiijada scan oo isticmaalaya "Filter Options" qeybta hoose ee midig, kaliya doorashada sawiro.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawiro ka Windows 8
Marka scan u dhammeeyey, oo dhan photos in la soo kabsaday karo waxaa laga heli doonaa oo soo bandhigay natiijada baaritaan. Waxaad riix kartaa inay iyaga ku eegaan mid mid. Markaas calaamadee kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.
Haddii aad sidoo kale doonayaa inuu ka soo kabsado dokumentiyo badan videos, sawiro iyo files audio, sida waraaqaha Office, PDF files, Archives, Emails, iwm ka computer ama qalab kale, waxaad u baahan tahay in ay doortaan version sare: Wondershare Data Recovery , taas oo sameeya in ka badan Photo Recovery ka.
Iibso Wondershare Photo Recovery ($ 34.95)